နယူးအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒ! သွင်းကုန် & ပို့ကုန်အပေါ် manifest နည်းဥပဒေအပြောင်းအလဲများ! - တရုတ် Longkou Fushi Pack
တရုတ်အကောက်ခွန် 1th ဇွန်လ, 2018 ရက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူဖြစ်သည့်ဘက်ကကျမှုကိုထငျရှားအုပ်ချုပ်မှုကိုထိန်းညှိဖို့အမိန့် No.56 ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
1.The ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်ကုန်တင်သတင်းအချက်အလက် / တရုတျဆိပ်ကမ်းများထဲက / မှတဆင့်မှဘုတ်အဖွဲ့ရေယာဉ်ရွက်ပေါ်ကြိုတင်တင်မှအီလက်ထရောနစ်တရုတ်အကောက်ခွန်မှ 24 နာရီတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
2.Shipper ရဲ့အခွန် ID ကို, ပို့ဆောင်သူရဲ့အဆက်အသွယ်နံပါတ်, pre-မန်နီးဖက်စ်ရှိအဓိကဒေတာအဖြစ် consignee ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုမဖြစ်မနေလယ်ကွင်းဖြစ်ချိန်ညှိနေကြသည်။
lading ၏ဥပဒေကြမ်းများအောက်မှာ 3.All ကုန်စည်လုံးဝနှင့်တိကျစွာမန်နီးဖက်စ်တွင်ကြေညာရပါမည်။ တရုတ်အကောက်ခွန်ကြေညာကုန်စည်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်အထည်ဖေါ်မည်ဖြစ်သည်။ အကောက်ခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှ In-ကိုက်ညီမဆိုပယ်ချခံရလိမျ့မညျ
အတော်များများကရေကြောင်းကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်ကောင်းစွာဆက်စပ်ကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ပါပြီ။ နှင့်ဖောက်သည်များရေကြောင်းကုမ္ပဏီများသည် '' ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင် cut-off အချိန်မရောက်မှီအတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံရေကြောင်းညွှန်ကြားချက်များကိုလိုအပ်သည်။
အဘယ်အရာကိုအပြောင်းအလဲများကဒီညှိနှိုင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ကြဉ်းကြမည်နည်း
ကုန်တင်တရုတ်ပြည်မကြီးသို့တင်သွင်းသို့မဟုတ်တရုတ်ပြည်မကြီးကတဆင့် transited များအတွက်သကဲ့သို့, ကုန်တင်၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှုကိုထငျရှားစဒေတာ 24 နာရီတင်ပို့, ဇွန်လ 1st, 2018 မတိုင်မှီအီလက်ထရောနစ်ဒေတာကနေတဆင့်တရုတ်အကောက်ခွန်ထံသို့စေလွှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
lading ၏ဥပဒေကြမ်းအောက်၌ရှိသမျှသောကုန်တင်များ၏အမည်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လုံးဝမန်နီးဖက်စ်အပေါ်ကြေငြာခံရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, သစ်ကိုအားမန်နီးဖက်စ်များ၏ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ဒေတာပစ္စည်းများပါဝင်သည်:
အဆိုပါ consignor ၏ 1.USCC
consignor ၏ 2.Phone အရေအတွက်ကို
အဆိုပါပို့ဆောင်သူ၏ 3.Enterprise Code ကို
အဆိုပါ consignee ၏ 4.Name (သို့မဟုတ်တိကျတဲ့အခြေအနေ၌ "အမိန့်" ရေးချ)
အဆိုပါ consignee ၏ 5.USCC (ထို consignee "အမိန့်" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, USCC လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဘူး)
6.Phone consignee အရေအတွက် (ထို consignee သတင်းအချက်အလက်များသည်လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဘူးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ထို့နောက် "အမိန့်" အကယ်. )
အဆိုပါ consignor ၏ 7.Name (သို့မဟုတ်တိကျတဲ့အခြေအနေ၌ "အမိန့်" ရေးချ)
အဆိုပါ consignee ၏ 8.Enterprise Code ကို
အဆိုပါ consignee "အမိန့်" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်အကြောင်းကြားပါတီ၏ 9.USCC လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ consignee "အမိန့်" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်အကြောင်းကြားပါတီ၏ 10.Phone အရေအတွက်ကလိုအပ်
ပြစ်ဒဏ်ထုံးစံကျမှုကိုထငျရှားပုံစံတင်ပို့ရန်အတွက်ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အကောက်ခွန်ကတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထုံးစံအမည်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် 2004 ခုနှစ်တွင်ထိရောက်သောဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့သည့် "တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်၏အုပ်ချုပ်ရေးပြစ်ဒဏ်၏အကောင်အထည်ဖော်ရေး Ordinance" ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည် '' သတင်းအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခဲပါသလား
အသစ်ကကျမှုကိုထငျရှားညှိနှိုင်းမှုများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း client များ '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးပါဘူး။
အထိခိုက်မခံ data တွေကိုပစ္စည်းများကို (ထို consignee ၏နာမတော်အဘို့အ မှလွဲ. ) မန်နီးဖက်စ်မှဆက်ပြောသည်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကထုတ်ပေး lading ၏ဥပဒေကြမ်းအပေါ်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်။ မန်နီးဖက်စ်ဓလေ့မှပို့ပြီးနောက်, အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့်အညီအကောက်ခွန်အလုပ်သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရပေမည်။
အဆိုပါဇွန်လ 1st ကုန်ပစ္စည်းချောချောမွေ့မွေ့အကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းသွားသေချာအသစ်ကျမှုကိုထငျရှား၏မှတ်ပုံတင်အာရုံစိုက်နှင့်ထိန်းသိမ်းခံခံများမှကုန်ပစ္စည်းများစောင့်ရှောက်ကျေးဇူးပြုပြီးစေရန်အလို့ငှာ, ထောင့်လှည့်ပတ်ပါ!